iOS Custom Myanmar Keyboard change into default English Keyboard - MYSTERY ZILLION
Vote Up0Vote Down iOSCrazy February2Posts: 2Registered Users မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခု iOS မှာ မြန်မာကီးဘုတ် တစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာက မိုးကုတ်ဘရောက်စာ လို ဒါမှမဟုတ် Sar App ထဲကလိုလုပ်ချင်တာပါအခုကျွန်တော် မေးချင်တာက မိုးကုတ်ထဲက ကီးဘုတ်မှာ အပေါ်မှာ ကီးဘုတ်ရွေးဖို့အတွက် Button လေးတစ်ခုသီးသန့်ပါတယ် အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် မြန်မာကီးဘုတ် ပြောင်းသွားပြီး မြန်မာကီးဘုတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန် ထပ်နှိပ်လိုက်ရင် English ကီးဘုတ်ကိုပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာ မြန်မာလိုတော့ပြောင်းပေမဲ့ မြန်မာကနေ အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်မပြောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်အစ်ကိုအစ်မတို့ကူညီပေးပါဦး	2 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down iOSCrazy February2Posts: 2Registered Users i got answer for my own question.Just add nil to inputView.Thanks everyone. :)	Vote Up0Vote Down saturngod February3Posts: 4,612Administrators Good ;)Sorry, I didn't get your question. So, I can't answer when I see.	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
February2saturngod
February3Tagged